ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာစေ့စပ်ထားသူမိန်းကလေးငယ်များ, အစဉ်မပြတ်သင်၏အအလေးချိန်ကိုကြည့်, အစားအစာမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစားအသောက်မော်ဒယ်, အသက်ရှင်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်3နှင့်7ရက်များအတွက်အစားအစာကိုစား, သူတို့ကပြပွဲနှင့်အခြားအရေးပါသောဖြစ်ရပ်များမတိုင်မီအမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ရုံကဤကိုယ်အလေးချိန်နည်းလမ်းများတင်းကျပ်ဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏအကြံပြုသည်မဟုတ်သူတို့ကိုအသုံးချသည်ဟုဆိုချင်တယ်။ ထို့အပြင်, အစားအစာဖို့ကန့်သတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေ့တော်၌ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမုန့်ညက်နောက်မ 15.00 ထက်ဖြစ်သင့်သည်။
တစ်နေ့တာအတွင်း, ရေများများသောက်ပေမယ့်နံနက်၌ကိုယ်ခန္ဓာ၏ရောင် detect လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်အကြောင်းမူကား, အိပ်မသွားမီကမလုပ်ကြပါဘူး။
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများဖယ်ရှားပစ်ရတစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာ artichoke နှင့် အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင် parsley ။ ပြင်ဆင်နေဟင်းလျာများဤထုတ်ကုန်အဆီအစာခြေဖြစ်စဉ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်သကဲ့သို့, ဂျင်းနှင့်နာနတ်သီးထည့်ပါ။
options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ကျနော်တို့အစားအစာထဲမှာအလေးအနက်န့်အသတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်လွန်းတင်းကြပ်မဟုတ် option ကိုစဉ်းစားရန်အဆိုပြုနှင့်အနာဂတ်၌, ထိုအလေးချိန်အလျင်အမြန်အလုံအလောက်ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
3 ရက်ကြာ Menu ကိုမော်ဒယ်အစားအသောက်များတွင်:
နံနက်စာ: သင်ထိုကဲ့သို့သောရေနှင့်လုပ်သောဂျုံယာဂုတစ်ဦးသောအဘို့ကိုအမျှရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်, တစ်ပန်းကန်ကိုစားရန်လိုအပ်သည်။ သကြားထပ်ထည့်ပါနဲ့ထောပတ်တားမြစ်သည်။
နေ့လည်စာ: ဘောဇဉ်မှာအသားသို့မဟုတ်ငါးပေါင်းနိုင်သည့်ပရိုတိန်း, ရှိသင့်သည်။ သင်ဆဲအချို့ဒိန်ခဲကိုစားနိုင်ပါတယ်။
ညစာ: ကပဲပုပ်ငံပြာရည်သို့မဟုတ်သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူ seasoned ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်, ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမုန့်ညက်, အလင်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်၏ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် 1000 ကယ်လိုရီတစ်နေ့သူတို့ရဲ့အစားအစာများ၏ကယ်လိုရီ content တွေကိုကန့်သတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ သင့်ရဲ့ကနဦးအလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး, သင်နှစ်ခုထဲကနေဆုံးရှုံးခုနစ်အပိုကီလိုဂရမ်အထိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအား menu က:
နံနက်စာ: နှစ်ခုကြက်ဥသို့မဟုတ်ပိန်ချက်ပြုတ်အသား 50 ဂရမ်, 1 Tsp ထောပတ်နှင့်အတူကင်နှင့်ပင်အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည် ..
နေ့လည်စာ: 100 ငါးအသားဂရမ်သို့မဟုတ်ပေါင်းနှင့်ဖြည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၏အခြားသောအဘို့ကို သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူ , Non-ချိုမြိန်အသီးများနှင့်ရေပူတရံ။
ညစာ: 300 ဂရမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်နှင့်လက်ဖက်ရည်။
အိပ်ရာမသွားမီလည်း 1 tbsp သောက်ရရန်လိုအပ်သည်။ ရေပူရေအေး။
7 ရက်များအတွက်အစားအသောက်ပုံစံများမှာလည်းသံပုရာနှင့်အတူရေအသုံးပြုမှုအတွက်ခွင့်ပြုနှင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ပိုကောင်းထိုသို့ပြုကြ၏။ ဒါ့အပြင်သကြားမပါဘဲ, သင်တန်း, ထိုကဲ့သို့သောလက်ဖက်ရည်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များတာဟာကဲ့သို့ပူအဖျော်ယမကာ, သောက်သုံးရကျိုးနပ်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ကင်းစင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
အစားအသောက်မဂ္ဂီ - အသီးအသီးနေ့အဘို့ menu ကို
ခန္ဓာကိုယ်ကင်းစင်ဖို့အစားအစာပေါ်မှပစ္စည်းများချ - အထိရောက်ဆုံး options များ
အစားအသောက် 10 စားပွဲပေါ်မှာ
မည်သို့ပါးလွှာ Tatiana Ustinova?
ဟာ Celiac အစားအသောက်များတွင်
အစားအသောက် Kovalkova - Menu ကို
စတား anise - ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြု
မည်သို့ပါးလွှာ Borodin မွေးဖွားပေးခြင်းပြီးနောက်?
အမြင့် Ariana Grande
သင်္ဘောသဖန်းသီး - လွင်ပြင်၌ကြီးထွားလာ
နှာခေါင်းကလေးတွေ Otrivin များအတွက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်
ကြိုး၏ကြက် - သူတို့ရဲ့ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်ယခုနှစ်သင်္ကေတ
Kovalkova အစားအသောက်များတွင် - Kovalkova များအတွက်သင့်လျော်သောအစာအာဟာရ - သုံးအဆင့်ဆင့်
Cameron Diaz ၏ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ကွန်ယက်၏ဝမ်းသာအသုံးပြုသူများအရှိ
Calico မင်္ဂလာဆောင် - ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးဘို့စိတ်ကူးများ
ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာဘာလဲ - မွငျ့မားထောက်လှမ်းရေး၏အရိပ်လက္ခဏာနှင့်ကမ္ဘာ၏အရှိဆုံးအသိဉာဏ်ကလူ
2 ဆီးချိုရောဂါရိုက်ထည့်ပါ - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နေအိမ်ကုစား၏အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်မည်ကဲ့သို့?